२०२१ मा डचटाउन प्राउड • डचटाउनस्टाएल.आर. • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
गत वर्ष, हामी समुदाय र एकताको भावना प्रदर्शन गर्न चाहन्थ्यौं जुन बाहिरी व्यक्ति वा यात्रीहरूले सजिलै नदेखिन सक्छ। त्यसो गर्न हामीले वितरण गर्न थाल्यौं डचटाउन गर्व नाम-तपाईंको-मूल्यको बदले यार्ड संकेतहरू DT2 don डाउनटाउन डचटाउनमा अनुदान। अभियान एक ठूलो सफलता थियो, २०० वटा चिह्नहरू डचटाउनमा वितरण गरियो।
तपाईंको डचटाउन गर्व साईन अर्डर गर्नुहोस्
हामी २०२१ मा डचटाउन प्रौंड अभियान फिर्ता लेराइरहेका छौं। हामीसँग पहिले भन्दा पनि बढि छिमेकीहरू छन् तिनीहरूको ब्लकहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्, सडकहरू सफा गर्नुहोस्, समितिहरुमा भाग लिनुहोस्, हाम्रो स्थानीय व्यापार समर्थन गर्नुहोस्, र के डचटाउन समुदाय बलियो बनाउँछ देखाउनुहोस्, लचिलो, र हाम्रो छिमेकीले सामना गर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार छ। सबैलाई थाहा दिनुहोस्!
तपाईंको डचटाउन गर्व साइन गर्नुहोस्!
यो वर्ष, हामी समान सम्झौताको प्रस्ताव गर्दै छौं-एउटा स order्केत दिनुहोस्, तपाइँको मूल्य नाम दिनुहोस्, र हामी तपाइँको लागी एक (वा दुई वा दश) छोड्नेछौं!
हामी लगभग $ १ of को योगदान सुझाव दिन्छौं। संकेतहरूले हामीलाई उत्पादनको लागि प्रत्येकको $। लागत दिन्छ - एक ठूलो धन्यवाद एक ठूलो भिन्नता संकेत र ग्राफिक्स हामीलाई यी कडा बनाउने सहयोगको लागि, युनियनले स signs्केतहरू सस्तो बनायो! लागत भन्दा बढी कुनै कोष सिधा जान्छ DT2 सबैको लागि एक अद्वितीय, विविध, र फल्लि Dutch डचटाउनको निर्माणको कार्यलाई जारी राख्न मद्दत पुर्‍याउन।
अहिले $ १ afford किन्न सक्दिन? समस्या छैन। हामी तपाईलाई एउटा सित्तैमा दिन्छौं। केवल अर्डरिंग प्रक्रियाको माध्यमबाट जानुहोस्, तपाईंको मूल्यलाई ० डलरमा राख्नुहोस्, र हामी अझै अर्को छिमेकीले उनीहरूको डचटाउनको गौरव देखाउँदा खुसी हुनेछौं।
स्थायी दाताहरूको लागि निःशुल्क डचटाउन गर्व साइन
२०२१ को लागि नयाँ, हामी डचटाउन प्रौंड स giving्केत दिइरहेका छौं जो कोहीलाई DT2 लाई दातालाई सँभाल्दै। तपाइँको मासिक आवर्ती दान सेट अप गर्नुहोस् र हामी तपाइँलाई एक संकेत पठाउने छौं। हामीलाई भन्नुहोस् कि यसलाई कहाँ छोड्ने।
कुनै योगदान योगदान गर्दछ - $ 5, $ 10, $ 25, वा month 50 एक महिना एक लामो यात्रा को लागी लामो यात्रा गर्छ DT2 लाई २०२१ र पछाडि योजना बनाएको उत्साहजनक कामलाई समर्थन गर्न। यस वर्ष, हाम्रो लक्ष्य भनेको चन्दा अनुदानको माध्यमबाट १०,००० डलर उठाउने छ। २०२१ को लागि लगभग $,००० डलर प्रतिबद्ध गरिसकेका, हामी अझै धेरै लामो यात्रा गर्न बाँकी छ, तर हामी आशा गर्दछौं तपाईंले हामीलाई त्यहाँ पुग्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
कोष कहाँ जान्छ?
संकेतहरूको लागत कवर गरे पछि, सबै आयहरूमा जान्छ DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन, हाम्रो 501०१ (c) ()) समुदाय विकास नाफा नकमाउने। DT3 को मिशन डचटाउन वरपरका आर्थिक विकास र प्रोत्साहन अवसरको सहूलियतले एक संवृद्धि समुदाय र साझा समृद्धिलाई प्रमोट गर्नु हो। यस मिसनको माध्यमबाट, हामी विभिन्न स्वामित्व आकर्षित गर्न, ठाउँ, ठाउँ, र अनुहारहरू बढाउने, र अधिभोग बढाउने लक्ष्य राख्छौं।
२०० 2005 मा छिमेकी व्यवसाय संघको रूपमा स्थापित, DT2 सधैं एक shoestring बजेट एक सबै स्वयंसेवक कर्मचारीहरु संग चलाएको छ। २०२० मा, हामी हाम्रो पहिलो पार्टटाइम कर्मचारी हायर गर्न सक्षम भयौं, डचटाउन ग्रोथ प्रबन्धक जेसिका पेने। जेसिकाले छिमेकीको विकास र गैर-नाफामुखी व्यवस्थापनमा वर्षौंको अनुभव ल्याउँदछ, र उनको सीपले कोष जुटाउन, सुरक्षित अनुदान, योजना योजनाहरू, र स्वयम्सेवकहरूलाई आकर्षित गर्न र कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
DT2 हालसालै साझेदारी गरिएको मिसौरी मुख्य सडक जडान मा भाग लिन अर्बनमेन कार्यक्रम, मिसौरी मा यस्तो पहिलो कार्यक्रम। मुख्य सडकको चार बुँदो दृष्टिकोण अनुसरण गरेर, DT2 नयाँ स्थापना भयो समितिहरु डचटाउनको भविष्यको लागि अधिक प्रभावकारी रूपमा योजनाको लागि छिमेकी सरोकारवालाहरूको नेतृत्वमा। समितिले पहिल्यै योजना र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दैछ छिमेक सफा, व्यापार समर्थन कार्यक्रमहरू, र गतिविधिहरू सक्रिय गर्न मार्क्वेट पार्क.
व्यक्तिगत रूपमा नियमित रूपमा भेला गर्न सीमित क्षमताको साथ पनि, गत वर्षले डीटी २ र समुदाय बीचमा बढी सment्लग्नता ल्याएको छ। नयाँ स्वयम्सेवकहरू, नयाँ र लामो समयका बासिन्दाहरू, र नयाँ र स्थापित व्यवसायहरूले डचटाउनलाई अगाडि बढ्नको लागि टीम बनाए। डचटाउनको गति पहिले कहिल्यै भएको थिएन।
भवन डचटाउन जारी राख्नुहोस् Today आज तपाईंको साइन पाउनुहोस्!
यदि तपाई छिमेकमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, आफ्नो दाबी एक डचटाउन प्राउन्ड साइनको साथ हिस्सेदारी गर्नुहोस्! यदि तपाईंले हालसालै डचटाउनमा बढ्दो समुदायको बढ्दो भावनाबाट प्रेरित भएको महसुस गर्नुभयो भने, त्यो आत्मालाई डचटाउन प्राउन्ड साइनको साथ देखाउनुहोस्! यदि तपाईंको चिन्ह जाडोमा उडायो भने, नयाँ डचटाउन गर्व साइन पाउनुहोस्! यदि तपाइँ तपाइँको ब्लक मा एकता देखाउन चाहानुहुन्छ, केही डचटाउन गर्व संकेतहरू पाउनुहोस् र तिनीहरूलाई आफ्नो छिमेकीहरूसँग साझा गर्नुहोस्!
तल दायर गरिएको DT2. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. DT2, डचटाउन, र अर्बनमेन. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अप्रिल 4th, 2021 .
DutchtownSTL.org DT2 २०२१ मा डचटाउन गर्व